PowerChord: केन्द्रीकृत स्थानीय नेतृत्व व्यवस्थापन र डिलर-वितरित ब्रान्डहरूको लागि वितरण | Martech Zone
PowerChord: केन्द्रीकृत स्थानीय नेतृत्व व्यवस्थापन र डिलर-वितरित ब्रान्डहरूको लागि वितरण
सोमबार, डिसेम्बर 27, 2021 सोमबार, डिसेम्बर 27, 2021 स्टेफनी श्रेभ
ठूला ब्रान्डहरू पाउँछन्, अधिक गतिशील भागहरू देखा पर्दछ। स्थानीय डिलरहरूको नेटवर्क मार्फत बेचेका ब्रान्डहरूमा व्यापारिक लक्ष्यहरू, प्राथमिकताहरू र अनलाइन अनुभवहरूको अझ जटिल सेट हुन्छ — ब्रान्ड परिप्रेक्ष्यबाट स्थानीय स्तरसम्म।
ब्रान्डहरू सजिलै पत्ता लगाउन र खरिद गर्न चाहन्छन्। डिलरहरू नयाँ नेतृत्व, थप पैदल ट्राफिक, र बढ्दो बिक्री चाहन्छन्। ग्राहकहरू घर्षणरहित जानकारी सङ्कलन र खरिद अनुभव चाहन्छन् - र तिनीहरू यो छिटो चाहन्छन्।
सम्भावित बिक्री लीडहरू आँखा झिम्काउँदा वाष्पीकरण हुन सक्छ।
यदि एक व्यापारीले 30 मिनेटको तुलनामा पाँच मिनेट भित्र पुग्छ भने, लाइभ जडान गर्ने सम्भावनाहरू 100 गुणा सुधार हुन्छ। र पाँच मिनेट भित्र सम्पर्क लिड को संभावना 21 गुणा बढ्यो।
समस्या यो हो कि खरिद गर्ने बाटो बिरलै छिटो वा डिलर-बेचे उत्पादनहरु को लागी घर्षण रहित छ। स्थानीय रूपमा कहाँ किन्ने भनेर अनुसन्धान गर्न ग्राहकले ब्रान्डको सावधानीपूर्वक क्युरेट गरिएको वेबसाइट छोड्दा के हुन्छ? के त्यो सीसा स्थानीय डिलरमा फनेल गरिएको थियो वा इनबक्समा धुलो जम्मा भयो? फलोअप कति चाँडो भयो - यदि हो भने?
यो एउटा बाटो हो जुन सामान्यतया ढिलो कागजात र असंगत प्रक्रियाहरूमा निर्भर हुन्छ। यो सबै सरोकारवालाहरूको लागि छुटेका अवसरहरूले भरिएको बाटो हो।
र यो सफ्टवेयर स्वचालन द्वारा रूपान्तरण भइरहेको छ।
PowerChord प्लेटफर्म सिंहावलोकन
PowerChord स्थानीय नेतृत्व व्यवस्थापन र वितरण मा विशेषज्ञता डीलर-बेचे ब्रान्डहरु को लागी एक SaaS समाधान हो। केन्द्रीकृत प्लेटफर्मले स्वचालन, गति, र विश्लेषण मार्फत स्थानीय स्तरमा नेतृत्वहरू अधिकतम बनाउनको लागि सबैभन्दा शक्तिशाली CRM उपकरणहरू र रिपोर्टिङ कार्यहरू ल्याउँछ। अन्ततः, PowerChord ले ब्रान्डहरूलाई तिनीहरूको डिलर नेटवर्कबाट सुरु गरेर आफ्ना ग्राहकहरूसँग सम्बन्धहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्छ, त्यसैले कुनै पनि नेतृत्व बेवास्ता गर्दैन।
Powerchord नेतृत्व व्यवस्थापन र वितरण
ब्रान्ड र डिलरहरूले PowerChord को उपयोग गर्न सक्छन् आदेश केन्द्र। कमाण्ड सेन्टर मार्फत, ब्रान्डहरूले स्वचालित रूपमा लीडहरू वितरण गर्न सक्छन् - तिनीहरू जहाँबाट उत्पन्न भए पनि - स्थानीय डिलरहरूलाई।
ती लीडहरूलाई बिक्रीमा परिणत गर्न डीलरहरूलाई अधिकार दिइएको छ। प्रत्येक डिलरसँग उनीहरूको स्थानीय बिक्री फनेल व्यवस्थापन गर्न नेतृत्व व्यवस्थापन उपकरणहरूमा पहुँच छ। डिलरशिपमा सबै कर्मचारीहरूले पहिलो सम्पर्क छिटो गर्न र बिक्रीको सम्भावना बढाउन नेतृत्व जानकारी पहुँच गर्न सक्छन्। बिक्री फनेल मार्फत प्रगतिको नेतृत्व गर्दा, डिलरहरूले नोटहरू थप्न सक्छन् ताकि सबैजना एउटै पृष्ठमा रहन्छन्।
स्थानीय नेतृत्व रिपोर्टिङ ब्रान्डमा रोल अप हुन्छ ताकि बिक्री नेतृत्वले सजिलै सबै स्थानहरूमा प्रगति निगरानी गर्न सक्छ।
द्रुत सम्पर्क बिक्री बन्द गर्ने कुञ्जी भएकोले, सम्पूर्ण PowerChord प्लेटफर्मले गतिलाई प्राथमिकता दिन्छ। ब्रान्डहरू र डिलरहरूलाई तुरुन्तै नयाँ लीडहरू बारे सूचित गरिन्छ — SMS मार्फत। यो स्थानीय डीलरशिप कर्मचारीहरु को लागी एक ठूलो मद्दत हुन सक्छ सामान्यतया दिनभर डेस्क र कम्प्यूटर मा बाध्य छैन। PowerChord ले भर्खरै एक क्लिक कार्यहरू पनि सुरू गर्‍यो, प्रयोगकर्ताहरूलाई कमाण्ड सेन्टरमा लग इन नगरी सूचना इमेल भित्र नेतृत्वको स्थिति अद्यावधिक गर्न अनुमति दिने सुविधा।
Powerchord एनालिटिक्स र रिपोर्टिङ
PowerChord ले ब्रान्डहरूको स्थानीय बिक्री प्रयासहरूलाई अनुकूलन गर्न रिपोर्टिङलाई केन्द्रीकृत गर्दछ। तिनीहरूले स्थानीय डीलरको नेतृत्व अन्तरक्रियाहरू हेर्न सक्छन् — क्लिक-टु-कल, निर्देशनहरूका लागि क्लिकहरू, र नेतृत्व फारम सबमिशनहरू सहित — एकै ठाउँमा र तिनीहरूले समयको साथ कसरी प्रवृति देखाउँछन्। ड्यासबोर्डले मार्केटरहरूलाई स्थानीय स्टोर प्रचलनहरू, जस्तै शीर्ष प्रदर्शन गर्ने उत्पादनहरू, पृष्ठहरू, र CTAs, र रूपान्तरणका लागि नयाँ अवसरहरूको मूल्याङ्कन गर्न अनुमति दिन्छ।
पूर्वनिर्धारित रूपमा, रिपोर्टिङ रोल अप हुन्छ - जसको अर्थ प्रत्येक डिलरले तिनीहरूको डेटा मात्र हेर्न सक्छ, प्रबन्धकहरूले प्रत्येक स्थानको डेटा हेर्न सक्छन् जसको लागि तिनीहरू जिम्मेवार छन्, ब्रान्डमा उपलब्ध विश्वव्यापी दृश्यसम्म। यदि आवश्यक भएमा यो डेटामा पहुँच प्रतिबन्ध गर्न अनुमतिहरू अनुकूल गर्न सकिन्छ।
ब्रान्ड मार्केटरहरूले उनीहरूको स्थानीय मार्केटिङ अभियानहरू कसरी प्रदर्शन गर्दछ भन्ने बारे अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न सक्छन्, लागत प्रति कुराकानी, क्लिकहरू, रूपान्तरण र अन्य लक्ष्यहरू सहित। PowerChord को एनालिटिक्स र रिपोर्टिङ सुविधाले लीड र राजस्व बीचको बिन्दुहरू जोड्छ, ब्रान्डहरूलाई यसो भन्न अनुमति दिन्छ:
हाम्रो नेतृत्व व्यवस्थापन र वितरण प्रयासहरूसँग जोडिएको हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ प्रयासहरूले राजस्वमा $ 50,000 योगदान गर्यो; गत महिना 30 लीडहरू उत्पन्न गर्दै, त्यसको 1,000% बिक्रीमा रूपान्तरण भयो।
यो सबै सँगै ल्याउँदै: ग्रासपपर मोवर्सले स्थानीय डिलर वेबसाइटहरू बढाउन PowerChord प्रयोग गर्छ र 500% लेड बढाउँछ।
ग्रासपर मोवर्स राष्ट्रव्यापी लगभग 1000 स्वतन्त्र डिलरहरूको नेटवर्क मार्फत विशेष रूपमा बेच्ने व्यावसायिक-ग्रेड घास काट्ने निर्माता हो। कम्पनीलाई थाहा थियो कि त्यहाँ नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्ने र यसको बजार हिस्सा बढाउने अवसर छ। त्यो अवसर स्थानीय व्यापारीहरूको हातमा थियो।
पहिले, जब सम्भावित ग्राहकहरूले ग्रासपर वेबसाइटमा उत्पादन लाइनहरू अन्वेषण गर्थे, तिनीहरूले स्थानीय डिलर साइटहरूमा क्लिक गर्दा बिक्रीका अवसरहरू कमजोर हुन्छन्। ग्रासपर ब्रान्डिङ गायब भयो, र डिलर साइटहरूले प्रतिस्पर्धी उपकरण लाइनहरू देखाए जसमा स्थानीयकृत स्टोर जानकारीको कमी थियो, जसले ग्राहकलाई भ्रमित गर्यो। नतिजाको रूपमा, डीलरहरूले उनीहरूले भुक्तानी गरेको लिडहरू गुमाउँदै थिए र बिक्री बन्द गर्न संघर्ष गरिरहेका थिए।
छ महिनाभन्दा बढीमा, ग्रासप्परले लीडहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर, डिजिटल ब्रान्डको स्थिरता सिर्जना गरेर, स्वचालन लागू गरेर, र इन-मार्केट डिलर प्रयासहरूलाई समर्थन गरेर आफ्नो ब्रान्ड-देखि-स्थानीय यात्रालाई अनुकूलन गर्न PowerChord सँग काम गर्यो। ग्रासपरले पहिलो वर्षमा 500% ले लीडहरू र अनलाइन नेतृत्व-उत्पन्न बिक्री 80% ले बढ्यो।
यहाँ पूर्ण केस स्टडी डाउनलोड गर्नुहोस्
तपाईंले नेतृत्व पाउनुभयो। अब के?
व्यवसायहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरू मध्ये एउटा बिक्रीमा नेतृत्वलाई रूपान्तरण गर्नु हो। महत्त्वपूर्ण मार्केटिङ डलर उपभोक्ताहरूलाई आकर्षित गर्न खर्च गरिन्छ। तर यदि तपाइँसँग तपाइँले उत्पन्न गर्नुभएको लीडहरूमा प्रतिक्रिया दिन प्रणालीहरू छैनन् भने, त्यसपछि डलर बर्बाद हुन्छ। अनुसन्धानले देखाउँछ कि सबै लीडहरूको आधा मात्र वास्तवमा सम्पर्क गरिएको छ। तपाईंको बिक्रीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभाव पार्न नेतृत्व व्यवस्थापनका उत्कृष्ट अभ्यासहरू लागू गरेर तपाईंको मार्केटिङ रणनीतिहरूको गतिमा पूंजीकरण गर्नुहोस्।
प्रत्येक नेतृत्वलाई जवाफ दिनुहोस् - यो तपाईंको उत्पादन वा सेवाको बारेमा बहुमूल्य जानकारी साझा गर्ने र खरिद निर्णय गर्न ग्राहकलाई सहयोग गर्ने समय हो। यो नेतृत्व योग्य हुने र प्रत्येक सम्भावित ग्राहकको रुचि स्तर निर्धारण गर्ने समय पनि हो। सान्दर्भिक र व्यक्तिगत संचार प्रयोग गरेर रूपान्तरणलाई बढावा दिनेछ।
द्रुत प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण छ - जब एक ग्राहकले तपाईंको प्रमुख फारम भर्छ, तिनीहरू आफ्नो खरिद यात्रामा अर्को चरण लिन तयार हुन्छन्। तिनीहरूले तपाईंको उत्पादनमा रुचि लिन पर्याप्त अनुसन्धान गरेका छन् र तपाईंबाट सुन्न तयार छन्। InsideSales.com को अनुसार,5मिनेट भित्र वेब लीडहरू पछ्याउने मार्केटरहरूले तिनीहरूलाई रूपान्तरण गर्ने सम्भावना9गुणा बढी हुन्छ।
फलो-अप प्रक्रिया लागू गर्नुहोस् - लिडहरू पछ्याउनको लागि परिभाषित रणनीति हुनु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं तुरुन्तै पछ्याउन वा पूर्ण रूपमा बिर्सेर अवसरहरू गुमाउन चाहनुहुन्न। यदि तपाईंले पहिले नै गर्नुभएको छैन भने तपाईंले CRM मा लगानी गर्ने विचार गर्न सक्नुहुन्छ — यस तरिकाले तपाईंले फलो-अप मितिहरू, उपभोक्तामा विस्तृत नोटहरू राख्न सक्नुहुन्छ, र तिनीहरूलाई पछिको मितिमा पुन: संलग्न गराउन सक्नुहुन्छ।
आफ्नो रणनीतिमा प्रमुख साझेदारहरू समावेश गर्नुहोस् - डिलरले बेचेका ब्रान्डहरूको लागि, बिक्री स्थानीय स्तरमा व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ। यसको मतलब स्थानीय डिलर बन्द हुनु अघि अन्तिम टच पोइन्ट हो। तिनीहरूलाई बन्द गर्न मद्दत गर्न उपकरणहरूद्वारा तपाईंको डिलर नेटवर्कलाई सशक्त बनाउनुहोस् — चाहे त्यो सामग्री हो जसले तिनीहरूलाई तपाईंको उत्पादनमा चलाख बनाउँछ वा नेतृत्व व्यवस्थापन र प्रतिक्रिया समयहरूमा मद्दत गर्न स्वचालित समाधानहरू।
‍PowerChord ब्लगमा थप स्रोतहरू प्राप्त गर्नुहोस्
टैग: बिक्रेताडीलर नेतृत्व विश्लेषणडीलरशिप विश्लेषणडीलरशिप नेतृत्व विश्लेषणडीलरशिप नेतृत्व रिपोर्टिङडीलरशिपघाँसफट्याङ्ग्रा घाँस काट्नेमुख्य विश्लेषकनेतृत्व वितरणनेतृत्व प्रबन्धनपावरकोर्ड
स्टेफनी श्रेभ पार्टनर इन्गेजमेन्टको उपाध्यक्ष हुन् पावरकोर्ड। उनी एक सफ्टवेयर र डिजिटल मार्केटिङ कार्यकारी हुन् जसको 20+ वर्षको अनुभव छ जसले विश्वव्यापी ब्रान्ड र रणनीतिक साझेदारहरूलाई समर्थन गर्न उच्च प्रदर्शन गर्ने टोलीहरूको नेतृत्व गर्छ। प्रदर्शनको ट्र्याक-रेकर्डको साथ, स्टेफनीले व्यापार परिणामहरू ड्राइभ गर्ने समाधानहरू सिर्जना गर्न ग्राहकहरूसँग बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्न प्रयास गर्छ। उनले नयाँ बजारमा पुग्न र व्यवसाय बढाउन उदीयमान प्रविधिहरूद्वारा प्रस्तुत अवसरहरूलाई अँगालेकी छिन्।
ConvertMore: यस फोन कलब्याक विजेटको साथ थप वेबसाइट भ्रमणहरू रूपान्तरण गर्नुहोस्